Umnotho angomunye kokuphila komphakathi. Man akuyona kuphela ehilelekile ubudlelwane kwezomnotho, kodwa futhi ufuna ukuqonda indlela isimo sawo. ezomnotho normative, okungukufa ukuhlaziywa kwezomnotho kuhlanganisa izinqumo ezidingekile. Lokhu iyahlule theorizing nje.
ithiyori Economic isetshenziswa ukufunda nokuxhumana abantu ukufuna izindlela eziphumelela kakhulu ukusetshenziswa izinsiza ukuhlangabezana nezidingo ngabanye. izindlela eziningi ukuhlaziya aqukethe omuhle (ukutadisha abangasebenzi okungalindelekile) futhi izakhi zokulawula (izindlela ngempumelelo inqubomgomo yentela ukunciphisa lokhu abangasebenzi).
ezomnotho normative kuyinto isiqondiso isayensi kwezomnotho, ogxile eziningi zenani izahlulelo maqondana imigomo ukuthuthukiswa nezinqubomgomo ezifanele, kahle, ezomnotho omuhle kuhilela ukuhlaziywa emaqinisweni okungasekelwa kuwo lo kamuva washayelwa izimiso eziyisisekelo ukuziphatha.
Kunezindlela eziningana izindlela theory kwezomnotho :
- Inductive - indlela yokucabanga, okuyinto Kusekelwe kwezici amaqiniso;
- Abstraction - indlela ukuphazamiseka konke angawi ngaphansi lomkhuba ngaphansi cwaningo, okusekelwe kuwo kukhona izigaba zezomnotho ezifana "inzuzo", "amanani", "izimpahla" (okuyinto ndawonye bakha isisekelo esinengqondo theory kwezomnotho);
- a deductive - ukucabanga indlela lapho imicabango bayahlolwa amaqiniso angempela;
- ukumodeliswa - isithombe lula engokoqobo.
umnotho Positive - konke okwenzekayo e-sanje, futhi zokulawula ukuthi yini kufanele kube esikhathini esizayo, ubunzima ezahlukene ngakho netiphetfo kuzo zonke ubudlelwano ezimisweni. eyinkimbinkimbi ezithile wezomnotho normative wukuthi iyokwehlela komunye umbono ovamile wokuthi avame kunzima kakhulu ukunquma yezindlela eziphumelela kakhulu ukufeza okujwayelekile (isimo somnotho elilungile) zezomnotho. Inkinga eyinhloko ekwenzeni isixazululo olulodwa itholakala lokuthi ukuthi ukuthuthukiswa izinhlelo zezomnotho - inqubo multivariate.
ezomnotho Isimo sengqondo esiqondile hhayi kuphela ekuhlaziyweni imiphumela inqubomgomo ethile yomphakathi, kodwa futhi incazelo eningiliziwe yonke imisebenzi lomkhakha womphakathi, kanye wonke amabutho enifeza noHlelo. Phuma zezomnotho ngale ukuhlaziywa omuhle kuholela shift emkhakheni lelawula umnotho, okuyinto lihlotshaniswa ukuhlolwa impumelelo izinhlelo ezihlukahlukene nokuthuthukisa amasu amasha ukuhlangana imigomo ethile. ezomnotho normative eliqhathanisa elingakanani ezihlukahlukene izinhlelo zikahulumeni ukuhlangabezana emigomweni.
Umnotho Positive and normative umphelelisi nomunye nekhululekile. Ukuze kulungiswe izahlulelo phezu izinyathelo ezidingekayo okufanele sithathwe isimo, qiniseka ukuthi yini imiphumela uyokwenza ukuba labo asebenesikhathi noma nezinye izenzo. Kuyadingeka ukuba akwazi ukuchaza ngokunembile izenzakalo Kusolakala ukuthi kuzokwenzeka uma kwenzeka umuntu eba kwezintela noma uxhaso ezimbonini ezithile.
Debate mayelana nezinga kahle kwezomnotho ezibhekwa theory omuhle kwezomnotho, okuyinto isekelwe kuphela amaqiniso kanye nokulutheka yangempela. Ingxoxo wezobulungisa umnotho kuyingxenye ezomnotho normative, okwenza lamahlulela phezu kwezimo zomnotho ethize kanye nezombusazwe. It alisho nje ukuya inkinga yokusabalalisa okulinganayo komkhiqizo. ezomnotho normative - isayensi yenza lube yigugu izahlulelo mayelana izinhlobo ezinkulu ukukhetha, okwenza isimiso sezomnotho. izinkinga Wokulawula njalo yonkhe izinhlangothi futhi izici emnothweni.
Kuyini zokuqapha? Impendulo itholakala Imininingwane ukuhlangana
Extrovert - a ...
Theory ka-Einstein ye wokuhlobana kwezinto, futhi ucwaningo olusha kule ndaba
Iqhaza abadlali drama "Umuntu ne Stars"
Isifo sofuba amathambo. Izigaba yentuthuko kanye nezimpawu
"Stealth Miss 6000" - imoto Wabasaqalayo bayathanda ngebhayisikili
Stomatitis ezinsaneni: ukwelashwa kanye nokuvimbela